I-MADRID Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
Isiqhelo saseMadrid sasisetyenziselwa ukubonisa umntu ovela eMadrid. Ngexesha leMinyaka Ephakathi xa isibongo saba khona, iMadrid yayidolophu elungileyo; kuphela ukuba yiNtloko yeSpain ngowe-1561. Imvelaphi yegama ayiqinisekanga, kodwa mhlawumbi ivela kwiLate Latin matrix , okuthetha "umlambo."
Xa amaYuda aguqukela ebuKristini eSpeyin ekhulwini le-15, nokuba ngaba ngokuzithandela okanye ngamagunya, babedla ngokuba negama lokugqibela esekelwe kwidolophu okanye kwisixeko okanye imvelaphi yabo.
Igama Igama: IsiSpanish , amaYuda
Igama elinguNye igama elithi Spellings: LAMADRID, DE LA MADRID
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-MADRID
Miguel de la Madrid - uMongameli weMexico ukusuka ngo-1982-1989
UJuan Madrid - umbhali waseSpeyin
Uphi igama elibizwa ngokuba yi-MADRID Igama eliqhelekileyo elitholakala ngokuqhelekileyo?
Isibongo seMadrid sixhaphake kakhulu eMexico, ngokutsho kwedatha yokusabalalisa igama kwi-Forebears, apho i-449 yesizwe. Ngokusekelwe kwipesenteji zabantu, kunjalo, ixhaphake kakhulu kwiHonduras, apho lifana nesizwe sino-58 esona siqhelo. I-Madrid iphinde ibe negama eliqhelekileyo kumazwe amaninzi aseSpain, kuquka nePhilippines, iSpain, eChile, eColombia, eVenezuela, eGuatemala, e-El Salvador nasePanama.
I-WorldNames PublicProfiler ichaza igama leMadrid njengento eqhelekileyo eSpain, ngakumbi kwimimandla yaseMurcia naseCastilla-La Mancha, ilandelwa nguAndalucia, iCommunidad Valencia, eCataluna kunye neCastilla Y Leon.
I-Madrid iphinda ifumaneke kwinani elikhulu kumntla-ntshona yeArgentina kunye nezantsi-ntshona eMelika, ngokukodwa kwimeko yaseNew Mexico.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name MADRID
Ama-50 aqhelekileyo amaSpanishi kunye neeNguqulelo zabo
UGarcia, Martinez, Rodriguez, Lopez, Hernandez ... Ngaba unye yezigidi zabantu abantu bezemidlalo enye yezona zi-50 eziqhelekileyo zamaSpanishi amagama okugqibela?
Qalisa uphando malunga neengcambu zakho zamaYuda kunye nesi sikhokelo kuphando olusisigxina somnxeba, iimithombo kunye namarekhodi ayingqungquthela yamaYuda, kunye neengcebiso zezona zizahlulo zeWebhu zoLwazi lwezahlulelo zeWebhsayithi kunye neenkcukacha zolwazi ukucinga kuqala ookhokho bakho abangamaYuda.
Indlela yokuphanda i-Ancestry yase-Hispanic
Hlola ezi nyathelo ezili-10 ukukunceda ukufumanisa ookhokho bakho baseSpain, kuquka iisiseko zophando lomthi waseSpeyin, i-Latin America, iMexico, iBrazil namanye amazwe angamaSpeyin.
Crest Family Family - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injenge-Madrid okanye isambatho sezandla zegama leMadrid. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
MADRID Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wegama laseMadrid ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho waseMadrid.
I-FamilySearch - MADRID Genealogy
Hlola iirekhodi ezingama-270,000 zembali ezikhankanya abantu ngabanye ngegama leMadrid, kunye nemithi yentsapho yaseMadrid kule ndawo yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
DistantCousin.com - I-MADRID yoGalobo & Imbali Yentsapho
Iinkcukacha zolwazi zamahhala kunye neefalo zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Madrid.
I-GeneaNet - iMadrid Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanegama le-Madrid, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
Inzala Yobudala beMadrid neNtsapho Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela iMadrid ukusuka kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Igama legama leFIGUEROA Intetho kunye Nemvelaphi
IGARCIA - Yisho igama kunye nomvelaphi
I-ALVARADO - Yithi Igama & Isiqalo
I-LOMBARDI Igama lomnqophiso kunye nembali yentsapho
Ngubani igama elibiziweyo?
Igama legama le-VEGA igama kunye nomthombo
I-COX - Igama elithi & Origin
I-BACHMAN Igama lomnqophiso kunye nembali yentsapho
Cómo aplicar para no pagar tarifas al USCIS
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiYunivesithi ze-Missouri Valley
I-ACLU izama ukunqanda umthandazo wempi, iziphambano kwiindawo zamangcwaba aseburhulumenteni?
Funda ngokuzalwa kweKrishna, ukuzaliswa koThixo oPhezulu
Iingoma ezingama-40 eziphezulu zamaKristu ze-2012
Iikholeji zeHununted neeYunivesithi
Yintoni uMthombo oyiNtloko?
Todo sobre visitar Estados Unidos como turista
I-Shastra ichazwa: Ulwalamano lweVedic kwiSikhism
Elektra vs. Bullseye: Ubani Owunayo?
Ukuzama ukubanjwa-ekugqibeleni-ekugqibeleni iBlocks kwiJava
Izinto ze-Hip Hop
IYunivesithi yaseNorth Dakota
Bafa Kuphi? Iziganeko Zembali Zokufa
Abahambi bexesha: Uhambo kwixesha elidlulileyo nelizayo
Goddess Parvati okanye uShakti
Indlela Yokufumana Imithombo Ethembekileyo
Iingqapheli ezili-10 eziqaphelisayo eziye zaba yiClassic
Funda iNessun Dorma Iingoma uze ufumane umbhalo
Ama-Work Numbers kunye neempendulo
Indlela Yokuba I-Inker In Book Book
Iimfuno zokuba yiSenator yase-US